Nchebe na World Omni-Channel
Google kpebisiri ike na n'otu ụbọchị, 90% nke ndị na-azụ ahịa na-eji ọtụtụ ngebichi iji gboo mkpa ha dị n'ịntanetị dị ka ichekwa ego, ịzụ ahịa, na njem njem na ha na-atụ anya na data ha ga-anọgide na-eche nche ka ha na-esi n'elu ikpo okwu gaa n'elu ikpo okwu. Site n'inwe afọ ojuju ndị ahịa dị ka ihe kacha mkpa, nchekwa na nchekwa data nwere ike ịdaba na mgbawa. Dabere na Forrester, 25% nke ụlọ ọrụ enweela nnukwute mmebi na ọnwa 12 gara aga. Naanị na United States na 2013, nkezi ọnụahịa nke ngabiga data bụ $ 5.4 nde.
Na infographic n'okpuru, Njirimara Ping na-egosi anyị otu agwa ndị ahịa na atụmanya si gbanwee, mmetụta na teknụzụ azụmaahịa, yana ọrụ dị mkpa nke nchekwa na-arụ mgbe a bịara n'ịkwalite ahụmịhe kachasị ndị ahịa. Soro ndụmọdụ ha iji jide n'aka na data ndị ahịa gị nwere ike ịnọrọ na nchekwa.
Tags: e-azụmahịae-ere ahịaecommerceinfographicomni-ọwaomnichannelnjirimara pingretailsecurity